Fitsidihana nataon’ny Fikambanan’ny Loholona sy Diakona avy amin’ny Fiangonana Fjkm Faritra Faravohitra . – Sénat de Madagascar
July 18, 2017 sinfo
Noraisin’ny Filohan’ny Antenimierandolona RAKOTOMANANA Honoré ny maraina teo ny delegasiona avy amin’ny Fikambanan’ny Loholona sy Diakona avy amin’ny Fiangonana Fjkm Faritra Faravohitra ,notarihin’ny Filohany ANDRIAMINAHY Laurent .
Mankalaza ny faha 50 taona ny Fiangonan’i Jesosy Kristy eto Madagasikara(FJKM). Hisy zaika be zay hotanterahana any Antsiranana ny faha 17,18 ,19 aogositra ho avy izao . Tonga nangataka tolo-tànana sy fiahiana ary fiaraha – miasa ho amin’ny fanantanterahana izany tamin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona ireo delegasiona ireo.
« Vontoso filazantsara ny Nosy Madagasikara », io no teny filamatry ny Fiangonana FJKM.
Nakasitraka sy hanohanana ary mankahery ireo delegasiona ny Filohan’ny Antenimierandoholona
Vonona ny hiara – hiasa mandrakariva amin’ireto firaisan’ny Loholona sy Diakona FJKM amin’ny Faritra Faravohitra ny Filoha RAKOTOMANANA Honoré amin’ny maha Raiamandreny azy .